Ikhaya Leholide laseTaatua
Omaio, Bay of Plenty, i-New Zealand
Imikhawulo ye-covid ka-Te Whanau-a-Apanui iyasebenza kule ndawo futhi ingase ithinte ukuhlala kwakho kweholide. Sicela usithinte ukuze uthole ukucaciselwa ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukha kwakho nathi. Izindawo zokuhlala e- Bush To Bay Holiday.
I-Fabulous 'suka kukho konke' ithatha imizuzu engama-45 kuphela ukusuka e-Opotiki nezinto zesimanjemanje ezifaka i-wifi.
Uma udinga 'ukusuka kukho konke' kodwa usafuna ukuxhumana nezwe langaphandle futhi ufuna ukusetshenziswa kwezidingo zokuphila ungabheki u-5638 State Highway 35, Omaio. Imizuzu engu-45 kuphela ukusuka e-Opotiki ongase usho kalula ukuthi usufinyelele 'endaweni yakho ejabulisayo'. Ikhaya lesimanje elinamakamelo amabili, eliyinhloko eline-ensuite, ikhishi elihle elinemishini yesimanjemanje, okuhlanganisa umshini wokuwasha izitsha, indawo yokuhlala enhle ne-wifi. Kodwa indawo yokuhlala yangaphandle yilapho uzozithola khona isikhathi esiningi. Funda incwadi, bheka ama-vistas asemaphandleni noma olwandle, dala ukudla okukhumbulekayo ku-bbq ngaphansi kwedekhi ekhaviwe.
Umhlaba ungowakho ngokoqobo ukuba uwujabulele, ngisho noma kuyisikhashana ngesikhathi, uyokhumbuleka.
Umuzwa wasemaphandleni wangasese